Guddiga Jaaliyada MUDUG ee MINNESOTA oo tacsi u diraya ehelada Warsame Cabdi Shirwac. [Akhris …] – Radio Daljir
Guddiga Jaaliyada MUDUG ee MINNESOTA oo tacsi u diraya ehelada Warsame Cabdi Shirwac. [Akhris …]
Tacsi: – Innaa Lilaahi wa Innaa Ileyhi Raajicuun
Ku: Ehelada Marxuum Warsame Cabdi Shirwac,
Ku: Maamulka Dawlada Puntland ee Dalka Soomaaliya,
Ku: Isimada iyo Waxgaradka Gobolka Mudug
Ka: Guddiga Jaaliyadda Mudug ee Minnesota USA.
Anagoo ah GUDDIGA JAALIYADDA MUDUG EE MINNESOTA waxaan tacsi u diraynaa dhammaan dadka Soomaliyeed, gaar ahaan shacabka reer Puntland meelkasta oo ay joogaan. Waxaanu uga tacsiyeynaynaa dilkii foosha xumaa ee maalintii Arbacada, bihsa Agoosto 8da, 2009, saacaddu markay ahayd 12:30 duhurnimo, bartamaha Magaala Gaalkacyo si bareer ah loogu geystay Wasiirkii Wasaaradda Warfaafinta, Isgaarsiinta, Hiddaha iyo Dhaqanka ee Maamulka Puntland, Marxuum Warsame Cabdi Shirwac.
Marka u horeysa waxaan Ilaahay uga baryeynaa inuu naxariistiisa jano ka waraabiyo marxuum Warsame Cabdi Shirwac. Marka xigtana Ilaahay inuu samir iyo iimaan inaka siiyo dhamaantayo.
Waxaan la wada soconayaa in Marxuum Warsame Cabdi Shirwac, ilaahay ha u naxariistee, uu ka mid ahaa wefdigii ballaarnaa ee ay Dowladda Puntland u soo xilsaartay inay sara u qaadaan nabada iyo horumarka gobolka Mudug. Waxaana la dilay wasiirka isagoo ku guda jiray sidii gobolka mudug uu u yeelan lahaa maamul hufan iyo nabdgelyo buuxda.
Waxaan ku talineynaa:
1) In maamulka Puntland sharciga horekeenaan ciddii ka dambeeysay dilka Wasiirkii Warfaafinta, Warsame Cabdi Shirwac.
2) Waxaan kaloo maamulka iyo shacabka reer Puntland ku boorinaynaa inay ka dhabeeyaan sidii maamul iyo kala dambayn loogu samayn lahaa gobolka Mudug.
Ugu danbayntii, waxaan ka xunahay inay arintan kusoo beegantay waqti Golayaasha Dowladda Puntland ee Gobolka Mudug iyo qurbojoogta reer mudug ee Minnesota u bilaabatey xiriir sidii ay iskala kaashan lahaayeen sidii dadka reer Puntland ee ku nool gobolka mudug u heli lahaayeen nabad iyo horumar.
GUDDIGA JAALIYADDA MUDUG EE MINNESOTA